Inodakadza chakanakisa chishandiso chekuongorora system Linux Vakapindwa muropa
Anovhenekesa chakanakisa chishandiso chekuongorora system
En chinyorwa chakapfuura takataura nezve StatusPilatus, yakanaka kwazvo chishandiso chinotibvumira kuongorora zvimwe zvikamu zvechikwata chedu, izvi zvinoita kuti zvive zvinokwezva nekuti Iyo inotipa isu ine yakajeka uye inokwezva GUI.
Asi chii chinoitika mune avo vanobata maseva kana vanosarudza kushandisa iyo terminal. Nokuda kweizvi tine maziso, rinova muchinjiko-chikuva kuraira tambo chishandiso, chakanyorwa muPython, kuongorora iko kushandiswa kwee CPU nzvimbo, Avhareji mutoro, Ndangariro, Network maficha, Disk I / O, processor uye faira system.
Kubwinya kunoshandisa iyo psutil raibhurari kuwana ruzivo rwehurongwa, uyezve iyo inopawo kugona kushandisa zvinoshandiswa mumutengi / server modhi yekutarisa kure. Zvekutarisa neiyi nzira, Glances inotipa iwe yewebhu interface.
Kubwinya kwakada kufanana naNmon Iyo ine compact kwazvo skrini yekupa muongororwo wakazara weakasiyana masisitimu zviwanikwa mune imwechete skrini nzvimbo. Izvo hazvitsigire chero kwakaomarara mashandiro, asi zvinongopa pfupi pfupiso.
Kubva pane iyo ruzivo iyo Glances inotipa isu, ndeiyi inotevera:
Ruzivo rwekuyeuka kusanganisira RAM, swap, uye yemahara memory.
Wepakati CPU mutoro wesystem yako.
CPU ruzivo, senge zvishandiso zvine chekuita nemushandisi, zvirongwa zvehurongwa, uye zvirongwa zvisina basa.
Yese nhamba yeanoshanda uye ekurara maitiro.
Dhawunirodha uye rodha pamitengo yekubatana kwenetiweki.
Disk I / O kuverenga uye kunyora ruzivo.
Inoratidza izvozvi zvakaiswa madhizaina disk.
Inoratidza iro razvino zuva uye nguva pazasi.
1 Maitiro ekuisa Glances paLinux?
1.1 Kushandiswa kwekutanga kwekutarisa
Maitiro ekuisa Glances paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ichi chinoshandiswa pane avo masystem, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Avo vari vashandisi veDebian, Ubuntu kana chero kupihwa kwakatorwa yeaya, iwe unogona kuisa Kubwinya kubva kune yako distro repositories.
Nokuda kweizvi ingovhura terminal pane yako system uye mhando iwo unotevera kuraira:
Iye zvino kune avo vari vashandisi veRHEL, CentOS, Fedora kana kumwe kugovera kunowanikwa yeizvi, kuisirwa kunogona kuitwa neumwe wemirairo inotevera:
Panguva yezvavari Arch Linux, Manjaro, Arco Linux kana imwe Arch Arch based distro vashandisi, kuisirwa kunoitwa nemirairo inotevera:
Finalmente Isu tinogona zvakare kuita kuiswa kwekutarisa nenzira iri nyore mune chero distro, zvakaringana nekutora uye kumhanya yekumisikidza script iyokuti vanotipa kubva kunzvimbo yavo.
Iwo script chaizvo zvazvinoita kuita kutarisisa kuisirwa nerubatsiro rwepip, saka ichatanga kuisa zvinoenderana nezvinodiwa wozoisa iyo application.
Iyo script inoshanda zvakanyanya nekuti inotiponesa isu kubva pakuteedzera akati wandei mirairo. Kuti uwane script, ingovhura terminal uye mairi tinonyora:
Kana kune avo vanosarudza kuita maitiro acho zvakananga:
pip install glances psutil
Uye isu tinoisa zvinodiwa zvinoenderana, pamwe nemapakeji ekuitwa kwewebhu webhu:
Kushandiswa kwekutanga kwekutarisa
Waita kuiswa Kutanga kushandisa chinoshandiswa, ingo mhanyisa iwo wekuraira:
Kupenya, ine yekukurumidza yekuwana makiyi, zviri:
m: Rongedza maitiro neMEM%
p: Ronga maitiro nenzira
c: Ronga maitiro neCCU%
d: Ratidza / kuviga disk I / O manhamba
a: Ronga mashandiro otomatiki
f: Ratidza / viga mafaira manhamba
i: Ronga maitiro neI / O kumhanya
s: Ratidza / viga sensor manhamba
y: Ratidza / kuvanza hddtemp stats
l: Ratidza / viga zvinyorwa
n: Ratidza / viga network manhamba
x: bvisa yambiro uye akakomba matanda
h: Ratidza / viga skrini rekubatsira
w: Delete yambiro marekodhi
Mukuwedzera ine mavara kodhi:
Uye nekutadza, Kufungidzira zvikumbaridzo zvakagadzirirwa ku:
Nguva kushandisa webhu saiti ingo mhanyisa iwo murairo:
Uye isu tinowana server yedu kubva pawebhusaiti tichishandisa port 61208.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo uye wobvunza zvinyorwa zvacho, unogona kuenda ku inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Anovhenekesa chakanakisa chishandiso chekuongorora system
yakadii fart iyo yavakaisa yekumisikidza script kuseri kwechinguva.ly chokwadi ...
Yakasanganiswa gore mhando. Gore rakasanganiswa nehunhu hwaro